Ngwaọrụ nchekwa ndị njem ọhụrụ nke ndị uwe ojii Spain maka njem njem njem Camino de Santiago
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Spain » Ngwaọrụ nchekwa ndị njem ọhụrụ nke ndị uwe ojii Spain maka njem njem njem Camino de Santiago
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Njem njem nke Camino de Santiago
Camino de Santiago, nke a na -akpọ n'asụsụ Bekee dị ka Ụzọ St. James, bụ netwọkụ nke njem nsọ na -eduga n'ụlọ nsọ nke Saint James Onye Ukwu na katidral Santiago de Compostela na Galicia na northwest Spain. Omenala na -ekwu na a na -eli ozu onye nsọ ebe a.
“Protegemos el Camino: Año Jubilar 2021-2022” pụtara n'ụzọ nkịtị, Anyị na-echebe ụzọ: afọ jubilii 2021-2022.
Mmemme ọhụrụ a bụ ichebe Camino de Santiago ka ndị njem ala nsọ na ndị njem nwee ike nọrọ ebe dị nchebe.
Na mgbakwunye, na dị ka ihe ọhụrụ, ndị uwe ojii mba nọ n'ụzọ ga -abụkwa ebe ọrụ maka akara nzere.
Onye isi Director nke ndị uwe ojii mba, Francisco Pardo Piqueras, wepụtara mmemme “Protegemos el Camino: Año Jubilar 2021-2022” nke bu n’obi ikwe nkwa nchekwa nke ndị njem ala nsọ na-eme njem dị iche iche nke Camino de Santiago na Spain.
Site n'ọfịs nke ndị uwe ojii mba, a ga -enwe ndị uwe ojii guzo n'ụzọ, ndị ga -abụ ndị kọntaktị ndị njem ala nsọ na ndị ga -arụkọ ọrụ na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ metụtara. Stationslọ ọrụ ndị a ga -abụ ebe ndị ọrụ maka stampụ nzere, ihe dị mkpa maka inweta "la Compostela" ozugbo ha mechara Camino.
Ozi na ihe onwunwe gụnyere koodu QR maka ịnweta ngwa ngwa na oghere nke ewepụtara na webụsaịtị ndị uwe ojii mba, ndị uweojii.es, iji kwalite Afọ Jacobean dị nchebe na Spen. N'ime ya, ndị njem ala nsọ ga -ahụ ndụmọdụ nchekwa, ọnọdụ nke ọdụ ndị uwe ojii kacha nso, akara stampụ jikọtara n'ụzọ, yana ohere ibudata kaadị stampụ. Nọmba mberede bụ 091.
Ndị uwe ojii si mba ndị ọzọ, ọkachasị site na Germany, France, Italy, na Portugal, ga -aga n'ihu na -eso ndị otu ndị uwe ojii mba na -enyere ndị njem ala ọzọ na ndị njem nleta aka. Ọrụ ha ga -abụ, n'etiti ndị ọzọ, ime ngagharị ngagharị, ọkacha mma n'ụkwụ, kamakwa n'ụgbọ ala, iji gbochie mpụ n'okporo ụzọ ọha.
Ha ga -akpọtụrụkwa ụmụ amaala n'ozuzu ha, ọkachasị, ndị njem si mba ha iji nyere ha aka n'ọrụ ntụgharị asụsụ na inyere ha aka na ịkwado ha na mkpesa. Ndị uweojii si mba ofesi ga -eme ngagharị na uwe ọrụ mba ha.
Ndị uwe ojii mba na -atụ aro ndị a: